“ရွှေမြန်မာ”: May 2008
ရွာထိပ်က လေဘေးသင့်သူများကို ကယ်ဆယ်လက်ခံထားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားအတွင်းမှာလည်း စည်းကမ်းတကျနဲ့ လှူနေကြပါတယ်။ ရသွားလို့ ပြုံးပျော်နေတဲ့သူတို့လေးတွေ မျက်နှာဟာ ကျွန်မရဲ့စိတ်ကို ကြေကွဲထိခိုက်စေပါတယ်။
စာ စသင်မယ့် ကျောင်းလေးရဲ့ အနေအထားပုံဖြစ်ပါတယ်။ သွားတုန်းကတော့ ဒီလိုလေးပါပဲ....။ စာသင်မယ်ဆိုလို့ မေးကြည့်တော့ ကလေးလေးတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ သမီးတို့ဆရာမက သေတဲ့အထဲ ပါသွားပြီတဲ့။ ပြန်သွားတဲ့ဆရာမတွေလည်း ခုထိတော့ ပြန်မလာသေးပါဘူးတဲ့။
ရွာထဲအ၀င်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းခြံကုန်းကနေ ၂ မိုင်ခွဲအကွာ လာကတည်းက လမ်းကြမ်းပါတယ်။
လမြတ်ကဆုန်ရဲ့ မှတ်ချက်မှာ အဖြေများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားလောင်းကြုံးဝါးသော စကားသည် အဘယ်စကားဖြစ်မည်နည်း။
မိုးသောက်ယံမှာ ရရှိတဲ့ ဥာဏ်သည် အဘယ်ဥာဏ်ဖြစ်သနည်း။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေ့သည် မည်သည့်နေ့ ဖြစ်သနည်း။
ဒီနေ့သည် မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဘုရားလောင်း သုမေဓာရှင်ရသေ့က ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှ ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နိယတဗျာဒိတ်ကို စံတော်မူခြင်း၊ ဘုရားလောင်း ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီး ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း၊ မဟာဗောဓိ ပင်ပေါက်ခြင်းနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူခြင်းဆိုတဲ့ အလွန်ထူးခြားပြီး ဗုဒ္ဓ၀င် မှတ်တိုင်ကြီးများကို စိုက်ထူးခဲ့သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတို့က ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့ဟု သတ်မှတ်ကာ အခါတော်နေ့ကို တခမ်းတနား ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ရောက် တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ မြို့ရွာဒေသ အသီးသီးတွေမှာ စေတနာ သဒ္ဓါတရားအလိုက် အလှူ ဒါနပွဲတွေ နောက်ပြီး ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွေအပြင် ဘုရားတွေမှာ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲဆိုပြီး ကဆုန်လပြည့်နေ့ရောက်တိုင်း ကျင်းပဆင်နွှဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ ရှေးရိုးစဉ်လာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရာသီပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု (ဘီ - စီ ၆၂၃) ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့တွင် ဘုရားလောင်းကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားလောင်းသည် ဖွားလျှင်ဖွားချင်းပင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး ခုနစ်ဖ၀ါး လှမ်းသွားပြီး ကြုံးဝါးပါတယ်။
ဘုရားလောင်းဖွားမြင်သော အချိန်မှာပင် ယသော်ဓရာမင်းသမီး၊ ညီတော် အာနန္ဒာ၊ ကာဠုဒါယီအမတ်လောင်း၊ ဆန္နအမတ်လောင်း၊ ကဏ္ဍကမြင်း၊ ရွှေအိုးကြီး လေးလုံးနှင့်အတူ ဗောဓိပင်လည်း ပေါက်ပါတယ်။ ယင်းတို့ဟာ ဘုရားလောင်းရဲ့ ဖွားဖက်တော်ခုနစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားလောင်းသည် မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်ပြီးနောက် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို ဆက်လက်အားထုတ်ပါတယ်။ ညဉ့်ဦးယံလွန်တော့ ဘ၀ပေါင်းများစွာကို ပြန်ပြီး အောက်မေ့ဆင်ခြင် သိစွမ်းနိုင်တဲ့ ပုဗ္ဗေနိဝါသဥာဏ်ကို ရတော်မူပါတယ်။ သန်းခေါင်းယံရောက်တော့ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်နေကြကုန်သော သတ္တ၀ါအားလုံးကို မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ ဒီဗ္ဗစက္ခုဥာဏ်တော်ကို ရတော်မူပြန်ပါတယ်။ မိုးသောက်ယံမှာ ကိလေသာဟူသမျှကို အကြွင်းမရှိ ပယ်နိုင်စွမ်းတဲ့ ---------- ဥာဏ်ကို ရတော်မူပါတယ်။ နေအရုဏ်တက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကို ရရှိတော်မူပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကား မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကုန် ဖြစ်ပြီး သက်တော်မှာ ၃၅ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု၊ (ဘီ - စီ ၅၃၄) ကဆုန်လပြည့် ---- နေ့ ညဉ့်အရုဏ်တက်ခါနီး မိုးသောက်ယံတွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတဲ့အချိန်မှာ သက်တော် ၈၀၊ ၀ါတော် ၄၅ ၀ါ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကလျာဏ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း သူတော်စင်အပေါင်းတို့ မှတ်ချက်များမှ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင်။ အားလုံး လပြည့်နေ့မှ စပြီး လိုအင်ဆနများ ပြည့်ပြည့်၀၀ ရရှိကြပါစေလို့ ယမင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ယမင်းလည်း အလုပ်ဆင်းရတဲ့အတွက် ပြည့်ပြည့်၀၀ မနားရတော့ဘူးလေ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဟောခဲ့တယ်။ အရာရာအားလုံးသည်းခံ၊ လူတွေအပေါ် မေတ္တာထား ဘယ်သူကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ်ကောင်းအောင် နေထိုင်ကြပါ။ ကိုယ်ပြုသော ကံ ကိုယ်ထံပြန်တဲ့။ လူသားတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရားမပျက်ဖို့ အဓိကပါတဲ့။ ဟုတ်တယ်နော်။
ကာတာမြို့ရောက် မြန်မာများရဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ပြောကြားချက်
ကာတာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာများရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကာတာနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာတွင် တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စားရလို့တော်သေးတာပေါ့... ဒီထက်ဆိုးတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။
ရှင့်မို့ လုပ်ရက်တယ် နာဂစ်ရယ်
တင့်တောင့်တင့်တယ် နေထိုင်မှု ကန့်လန့်ကာကို
ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ရှင့်ကို အပြစ်ဖို့လို့နေရုံမှတစ်ပါး
ရှင် ပြန်ဖာထေးလို့ ရနိုင်တော့မှာလဲ...
ဒါဟာ လောကဓံတရားကို အံတုလို့ရမလား
မဖိတ်ခေါ်ပဲ လူအများဆီ သေခြင်းတရားရောက်ရှိလာခဲ့
မည်သူမှ အဆင်သင့်မဖြစ်ခင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရ
သူငါ အများ မထင်ငြား သူကား
ကွဲပြိုတတ်ငြား၊ ထိုတရား၊ ထင်ရှားပြိုကွဲမည်
ပျက်စီးတတ်ငြား၊ ထိုတရား၊ ထင်ရှားပြိုကွဲမည်
ငါ့ဆွေမျိုးသာ ပျက်စီးရာ မှတ်စွာမဟုတ်ပြီ
သူ့အမျိုးကိုယ့်အမျိုး ပျက်စီးရိုး သေမျိုးထုံးစံညီ
တစ်ရွာတည်းသာ ပျက်စီးရာ မှန်စွာ မဟုတ်ပြီ
ရွာဟူသမျှ ပျက်စီးကြ သေရထုံးစံညီ
မြို့ဟူသမျှ ပျက်စီးကြ သေရထုံစံညီ
စကြ၀ဠာ ဘုံသုံးရွာ သေရာ မလွတ်ပြီ
တရားသဘော ကြံတွေးတော မှန်သော သံဝေရည်....
ယမင်းလေ စိတ်ညစ်လွန်းလို့ ဘာမှလည်း မလုပ်ချင် ဘယ်နေရာမှလည်း မကြည့်ချင် ဘယ်မှလည်း မသွားချင်တော့ဘူး။ အရာအားလုံးက ကံကြမ္မာကြောင့်လား ? လောကံဓံတရားကြောင့်လား....
I sincerely sympathize with you in this terrible loss.